NY LOJIKA POLITIKA VOALOHANY DIA NY FAMPIHARANA NY ANDININY FAHA 20 AO AMIN’NY TONDROZOTRA – MyDago.com aime Madagascar
NY LOJIKA POLITIKA VOALOHANY DIA NY FAMPIHARANA NY ANDININY FAHA 20 AO AMIN’NY TONDROZOTRA
Amiko hoy ny Ct Randriamamiarizafy Ignace teny amin’ny Magro Behoririka androany Alatsinainy 06 janoary 2014 dia ny lojika politika voalohany dia ny fampiharana ny andininy faha 20 ao amin’ny tondrozotra. Rehefa misy hoy izy ny filoham-pirenena vaovao eo dia rava ny tondrozotra, Ravalo tsy tonga.Aiza ho azia ny fampiharana io hoy ny fanontaniana napetrany ? Ny fijeriko ny raharaham-pirenena hoy Ignace dia tsy manaraka lojika. Raha izahao manokana hoy izy dia tsy ny fanaovana fampitahana ny voka-pifidianana no vahaolana fa ny lalàna no hampiharana. Tsy azo atao ny manao fampielezan-kevitra ho an’ireo mpitondra izay efa nambaran’ny Ces ka noho izany dia disqualifié ho azy ny kandida Hery. Tena tsy misy lojika politika eto amintsika. Ny zavatra hangatahiko hoy izy amin’ny Ces dia apetraho ny lojika fampiharana ny sazy. Ho ahy manokana hoy Ignace dia rehefa matin’ny fahantrana ny vahoaka dia natakalon vola ny firenena, ary izaho manokana dia mbola vonona hanohy ny tolona satria mbola tsy tonga ny filoha Ravalomanana.
Ny Ct Hilarion Rarison dia nilaza fa tsy isika izao no nanao ny lundi noir tamin’ny 2009, noho izany tsy misy fantatro izany ary tsy manana ny eritreritra hanao izany isika. Raha ny amin’ny faritra hoy izy amin’izao fotoana izao dia hanomboka hidina an-dalambe hiaro ny safidiny. Ankehitrinyhoyizy dia aely any amin’ny lehiben’ny tafika ary atao honohono fa hampiditra merisenera eto ny filoha Ravalomanana , ka hanaovana fiambenana ny sisi-dranomasina. Tsy marina izany hoy Hilarion ary tsy mieritreritra ny hampiditr akomando eto izy fa hiaro ny safidintsika. Ny paikan’ny teetzamita amin’izao fotoana izao dia handefa orana artifisialy mba tsy hahafahan’ny movansa Ravalomanana manao hetsika, noho izany dia minagavy anareo any amin’ny faritra iva far aha misy ny todra-drano dia nalefan’ny mpitondra izany. Fantatra hoyizy fa vao nanomboka ny fananganana ny Ceni-T dia niomanana amin’ny halabato satria avy amin’izy ireo ny lehibe. Nisyhoy izy ny halatra nataon’ny lehiben’ny informatika izay babo tao Frantsa, ny antony raha vao mpikirakira ny informatika dia sy tafapetra eo io. Ny lalàna iainantsika ary ny mpahay lalàna efa nilaza fa matoa noravana ny Ces voalohany dia heo tsy nanara-dalàna satria nampiditra kandida tsy ampy enimbolana ny nipetrahany teto, nesorina I Neny, Ratsiraka, Rajoelina. Mitovy amin’izany hoy Hilarion no nataon’ny Ces amin’izao fotoana izao, ampiharina ihany koa izay ny tsy fahazoan-dRajoelina manatrika fampielezan-kevitra ka disqulafié ny kandidany. Mitrotro am-bavaka isika androany hariva hoy izy fa rahampitso amin’ny 9 ora ny filoha Ravalomanana any Namibie history isika eo anatrehan’ny Sadc, troika amin’ny halatra be vava. Mbola hihaona amin’ny vondrona afrikana ihany koa ny delegasiona afakampitson’io. Noho izany hoy ity mpanao politika ity dia tongava maro rahampitso ka ho hitan’izao tontolo izao fa miaro ny safidintsika isika izay nahodikodin’ny sasany ary tsy miala amin’ny Robinson isika fa tsy maintsy mandresy izy. Aza simbasimbaina hoy izy aloha ny zavatr ataon’ny filoha Ravalomanana any ivelany any fa kapoakany izany fandresehandahatra izany. Ankoatra izay dia nambarany fa mandeha ny fanangonam-baovao ataon’ny tafika, aleo izy hanao ny asany fa izahay tsy handoro trano, na hanimba fananan’olona raha mivoaka eto fa ny anay tsotra ataovy amin’ny mangarahara ny famoahana ny voka-pifidianana. Entano ny olona any amin’ny fokontany any hoy Hilarion hiaro ny safidimbahoaka. Aoka isika hoy izy hanaraka ny toromarika omen’ny lehibe fa kely sisa, ary izaho matoky fa ireo olona 19 ao amin’ny Ces dia tsyhamono tena ireo fa manana ny maha izy azy.Raha sanatria miziriziry amin’ny fandaniana an’I Hery ny Ces dia manangana governemanta izy ireo dia mba manangana ihany koa isika, fa tsy misy manaiky eto.
Ny andininy faha 16 ao amin’ny “feuille de route” : antsahatra daholo ny raharaham-pitsarana politika.
RAVALOMANANA MARC : TSY MAINTSY TANTERAHINA NY TONDROZOTRA INDRINDRA NY ANDININY FAHA 20
Auteur Solo Razafy*Publié le 6 janvier 2014 Catégories Politique
4 pensées sur “NY LOJIKA POLITIKA VOALOHANY DIA NY FAMPIHARANA NY ANDININY FAHA 20 AO AMIN’NY TONDROZOTRA”
6 janvier 2014 à 17 h 57 min
Hamboarina tsara ary ny paik’ady aorianan’ny fanambaran’ny CES ny fandresen’i fery . Raha tsy misy paik’ady mazava aho dia ho very ny safidy-bahoaka.
Nandritr’izay dimy taona izay ve dia mbola tsy tonga saina ihany ianareo, fa fanjakan’ny baroa no misy ao Madagasikara ê ?
Laojika paolitika inona ity mbola resahanareo ity ?
Ny Charte-n’ny Union africaine aza voahitsakitsaka, ary dia navela handray anjara ary MITANTANA FIRENENA MIHINTSY AZA NY MPANONGAM-PANJAKÀNA.
7 janvier 2014 à 0 h 57 min
Ao anatin’ny Fitsarana ny isam-bato nataon’ny ceni-t ny ces..
Mazava ny asan’ity Fitsarana ity : misy ny code électoral izay manome ny atspirian,ireo heloka tsy azo hatao ary eo koa ny sazy mifanojo , mendrika an’ilay heloka vita..
Niteny ny ces fa atao aloha ny « disqualifications » vao miroso amin’ny » confrontations » rizareo .
y fandraisana ny SADC ny Filoha-pirenena RAVALOMANANA MARC sy ffanetrehany amin’ny Vondrona Afrikanina (UA) rahampitso hoe , dia vaovao mahafaly !Izay no azo tenina fa sao…tsy marina izany vaovao izany !
7 janvier 2014 à 6 h 31 min
Lojika lojika lojika foana zavatra efa tsy misy irika izany mbola zany ihany no dradradraina eto,ao @ magro ao foana ka rarainy inona,mba manandrama ndray mivoka ao fa ho itanareo fa tsy ela reny dia mivoha,tsika manao ariarizato ambony fandriana
Précédent Article précédent : HERY RAJAONARIMAMPIANINA mis en cause dans l’affaire du bois de rose
Suivant Article suivant : Pourquoi Fatouma Samoura s’est-elle sentie le besoin d’aller accueillir le candidat Hery Rajaonarimampianina à ce bureau de vote?